Imithi yokuThetha, iApartment - I-Airbnb
Imithi yokuThetha, iApartment
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAngelique
Talking Trees Apartment situdiyo esipholileyo esiseFoster Hall eSt. Kufuphi neBhatshebha (i-surfing), ihotele yase-Atlantis (ikhofi elungileyo) kunye ne-Martin's Bay (ukutya okulungileyo). Uya kuyithanda indlu yam kuba intle, inendawo entle, ijikelezwe luhlaza kunye nendawo engaphandle (inkulu ekugcineni iibhodi zokusefa). Ilungele izibini kunye nabahambi bebodwa abafuna ukuphuma kwindlela ebethiweyo.
Yindlu yesitudiyo elula, enepatio enkulu. Uziva ngathi ungaphandle, ngelixa ukhuselekile ngaphakathi.
4.86 · Izimvo eziyi-51
Emaphandleni...ujikelezwe ngamatyholo kunye nohlaza kunye nako konke okuqinisekisayo, kodwa kufutshane neelwandle zokusefa kunye nokuntywila, kunye neendawo zokutyela ezintle zombini zasekhaya (iMartins bay, iRound House) kunye nesiphelo esiphezulu (Atlantis).
Umbuki zindwendwe ngu- Angelique
Ndidla ndingabikho, kodwa ndihlala ndinomntu oza kuncedisa xa kukho imfuneko.